Doodihii Badda Soomaaliya oo maanta la soo Gababeeyey – Xeernews24
Doodihii Badda Soomaaliya oo maanta la soo Gababeeyey
23. September 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa Maanta oo Jimca ah lagu soo gabagabeeyay Magaalada Hague (Hayg) ee Dalka Holland, muran Badeedkii u dhexeeyay Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, taasoo la dhagaysanayay Maalmihii lasoo dhaafay.
Qareennada ka socda Dowladda Soomaaliya oo Maanta mar kale la dhagaystay, ayaa muujinaya yididiilo ah in ay Soomaaliya u xukumi doonto Maxkamadda Caddaaladda ICJ, marka ay kasoo munaaqishooto doodaha Labada dhinac 90 Cisho ka dib.
Muddo Saddex Bilood ah ka dib, haddii ay Maxkamaddu go’aan ka gaari weydo dacwaddan, ayaa waxaa lagu xallin doonaa sida uu qorshuhu yahay hab Diblomaasiyadeed, taasoo ah mid ay Soomaaliya si weyn kaga kasoo horjeeddo.
Dowladda Kenya,ayaa iyadu ku qanacsan in Kiiska Maxkamadda Caalamiga ah la laalo,taas dhiggeedana waan waan hoose wax lagu dhammeeyo, si ay ugu faa’iideysato hab musuq maasuq ah.
Qareennada Soomaaliya u metelayay Dacwadda lagu soo gabgabeeyay Magaalada Hague, ayaa sheegaya inay Kenya dooneyso inay Badda ku hantido ku manna sheegasho ah inay Dadka Soomaaliyeed ka saacidday waxyaabo badan, isla markaana ayan xaq u lahayn in lagu qabsado Bad iyo wax la mid ah.
Halka uu muranku ka taagan yahay oo uu cabbirkeeduna yahay, 42,000km2, ayaa la sheegayaa iney tahay meel uu ka buuxo Kheyraad fara badan, iyadoo intii uu murankan soo jiitamayayna ay Dowladda Kenya geysay shirkado baara saliidda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/Badda2-300x194.jpg 194 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-23 16:38:432016-09-23 16:38:43Doodihii Badda Soomaaliya oo maanta la soo Gababeeyey
DAAWO SAWIRADA :- Sheekh Shariif oo soo gaadhay Muqdisho+so dhaweynta losam... Dowlada Afghanistan oo heshiis la gaadhay ururka Xisbul Islam cafisna u fidisay...